ကနေဒါယဉ်ကျေးမှုမတူကွဲပြားမှု | Absolut ခရီးသွား
La ကနေဒါယဉ်ကျေးမှုမတူကွဲပြားမှု ၎င်းသည်ဤတိုင်းပြည်၏လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ထူးခြားထင်ရှားသောလက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ် ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအကုန်တွင်ဤနိုင်ငံသည်အလံကိုသိမ်းယူခဲ့သည် ယဉ်ကျေးမှု, အများဆုံးရာထူးတိုးသောပြည်နယ်များ၏တ ဦး တည်းဖြစ်လာသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး.
အ ကနေဒါဌာနေတိုင်းရင်းသားများ"ပထမနိုင်ငံများ" ဟုလူသိများသောဘာသာစကား ၆၀ ကျော်ကိုဘာသာစကားပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၁၉၈၂ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဤလူမျိုးများကိုအုပ်စုသုံးစုခွဲထားသည်။ အင်ဒီးယန်းတွေ၊.
ကနေဒါဌာနေတိုင်းရင်းသားများ ("ပထမနိုင်ငံများ") သည်နိုင်ငံ၏စုစုပေါင်းလူ ဦး ရေ၏ ၅% ခန့်ရှိသည်။
ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရဤဌာနေလူ ဦး ရေသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လူ ဦး ရေ ၁ သိန်း ၁ သောင်းခန့်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ၄ င်းတို့၏ထက်ဝက်ကျော်သည်သီးခြားကျေးလက်နေလူထုသို့မဟုတ်သိုက်များတွင်နေထိုင်ကြသည်။
၁၇ ရာစု၌ယခုကနေဒါ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောနယ်မြေများကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးကိုလိုနီနယ်ချဲ့ခဲ့သည် ဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ်သူတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောနယ်မြေများကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ထိုနယ်မြေများတွင်ဥရောပ၌တည်ရှိမှုသည် ၁၉ ရာစုတစ်လျှောက်ကြီးမားသောရွှေ့ပြောင်းမှုလှိုင်းများကြောင့်တိုးပွားလာခဲ့သည်။
၁၈၆၇ ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကနေဒါအစိုးရများသည်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအပေါ်ရန်လိုသောမူဝါဒကိုတီထွင်ခဲ့သည် "လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု။ " ရလဒ်အနေဖြင့်ထိုမြို့များ၏လူ ဦး ရေအချိုးအစားကိုသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည်။
ကွီဘက် (ပြင်သစ်စကားပြောသောကနေဒါ) တွင်အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်သည်
လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တစ်ဝက်ခန့်အထိကနေဒါလူ ဦး ရေ၏အများစုသည်ပြင်သစ် (ပထဝီဝင်အနေအထားအရပြည်နယ်၏ဒေသ၌တည်ရှိသည်။ ပြင်သစ်) အဓိကဥရောပအုပ်စုနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျူးဘက်) နှင့်ဗြိတိသျှ။ တိုင်းပြည်၏ယဉ်ကျေးမှုအခြေစိုက်စခန်းများသည်ဤလူမျိုးနှစ်မျိုးအပေါ်အခြေခံသည်။
ကနေဒါလူမျိုး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုမိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်လည်းကောင်း၊
၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များ မှစ၍ ဥရောပနှင့်အမေရိကန်မှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုကန့်သတ်သည့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုပြုပြင်ခဲ့သည်။ ဒီရလဒ်ခဲ့သည် အာဖရိက၊ အာရှနှင့်ကာရစ်ဘီယံဒေသမှပြောင်းရွှေ့လာသူများ.
ကနေဒါနိုင်ငံ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှုန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို၎င်း၏စီးပွားရေး၏ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှု (ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများမှလူများထံမှတောင်းဆိုခြင်း) နှင့် ၄ င်း၏မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးမူဝါဒတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကနေဒါနိုင်ငံသည်ဒုက္ခသည်အများဆုံးနေထိုင်သောအနောက်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုအရနိုင်ငံအတွင်းကွဲပြားသောလူမျိုးစု ၃၄ ခုရှိသည်။ ယင်းတို့အနက်တစ်ဒါဇင်သည်လူတစ်သန်းကျော်လွန်သည်။ ကနေဒါရှိယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးတွင်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။
ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ကနေဒါနိုင်ငံ၏အခြေအနေကို ၁၉၉၈ တွင်ပြဌာန်းခဲ့သည် ကနေဒါ Multiculturalism အက်ဥပဒေ။ ဤဥပဒေသည်ကနေဒါအစိုးရအား၎င်း၏နိုင်ငံသားအားလုံးအားပြည်နယ်မှတန်းတူညီမျှဆက်ဆံရန်သေချာစေပြီး၊ မတူကွဲပြားမှုကိုလေးစားတန်ဖိုးထားသင့်သည်။ အခြားသောဥပဒေများအရဤဥပဒေသည်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏အခွင့်အရေးများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးလူမျိုး၊ အသားအရောင်၊ မျိုးရိုး၊ အမျိုးသားရေး၊ လူမျိုးရေး၊
ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တိုင်းတိုင်းပြည်ကိုဂုဏ်ပြုလေ့ရှိတယ် ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစနစ်နေ့။
ကနေဒါရှိယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုသည်ယနေ့တိုင်းပြည်၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ စဉ်းစားသည် ကွဲပြားခြားနားသောသည်းခံစိတ်နှင့်ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာ။ ကမ္ဘာ့ဒေသအားလုံးနီးပါးမှတိုင်းပြည်သို့လာရောက်သူများ၏လက်ခံမှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှုသည်၎င်း၏နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်အလွန်လေးစားခံရသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်ကနေဒါအစိုးရအဆက်ဆက်ကိုယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစနစ်ကိုကျင့်သုံးရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခြင်းသည်ပြင်းထန်သည့်အရာများဖြစ်သည် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ အထူးသဖြင့်ကွီဘက်ဒေသရှိကနေဒါလူ့အဖွဲ့အစည်းအချို့မှလာသည်။
ဝေဖန်သူများကယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစနစ်သည်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုအုပ်စုဝင်များကိုကနေဒါနိုင်ငံသားများအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းထက်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအလေးထားရန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများကိုဖန်တီးရန်အားပေးသည်ဟုဆိုကြသည်။
ကနေဒါလူ ဦး ရေ (၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၃၈ သန်း) လူမျိုးရေးအရ
အင်္ဂလိပ် ၅၆% (ရုံးသုံးဘာသာစကား)
ပြင်သစ် ၂၂% (တရားဝင်ဘာသာစကား)
ခရစ်ယာန်ဘာသာ ၆၇.၂% (ကနေဒါခရစ်ယာန်တစ်ဝက်ကျော်သည်ကက်သလစ်ဘာသာဖြစ်ပြီးငါးပုံတစ်ပုံသည်ပရိုတက်စတင့်များဖြစ်သည်)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ကနေဒါယဉ်ကျေးမှုမတူကွဲပြားမှု